4 arrin oo Farmaajo ku qasbeysa inuu wada-hadal ka galo doorashada Dalka labada isbuuc ee ka hartay waqtikiisa
Wednesday January 13, 2021 - 14:32:22 in News by Xaaji Faysal
Arrimahaan oo dhan ayaa la aaminsan yahay in 10-ka maalmood ee soo aadan
Daruufaha Madaxweynaha ku qasbabaya in uu heshiis galo ayaa kala ah
1- In muddo xileedkiisa uu dhamaad yahay oo ay ka harsan yihiin 25 maalmood oo kaliya, taasi oo macnaheedu yahay in firaaq awoodeed uu dalka ka dhici karo, haddii aan la helin heshiis deg deg ah.
2- In haddii uu dhamaado muddo xileedkiisa uusan yeelan doonin awood sharci oo uu ku meel mariyo go’aan walba oo xafiiskiisa laga soo saaro, taas oo keeni karta in wax badan uu ku waayo.
3- In uu jiro culeys badan oo dhanka beesha caalamka ah oo madaxweynaha la saaray muddooyinkii ugu dambeeyay, ayada oo beesha caalamka ay u sheegtay inaysan maal-gelin doonin doorasho aan wadar-ogol aheyn, waxaana qoraal shalay kasoo baxay ay ku baaqday in heshiis laga gaaro doorashada.
4- Cabsi uu ka qabo in uu sabab u noqdo qalalaaso dagaal ama rabashado dalka ka dhaca, islamarkaana uu sabab u noqdo in dalka ku laabto meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor, xilli u ahaa Madaxweynihii loogu rajada wanaagsanaa burburkii kadib.
5- In madaxweyne goboleedyadii ku garabka ahaa ee uu isku haleynayey ay ka cago jiidayaan inay qabtaan doorasho aan wadar ogol aheyn, taasi oo markii hore uu qorshuhu ahaa.
Arrimahaan oo dhanayaa la aaminsan yahay in 10-ka maalmood ee soo aadan dalka u jiheyn doonaan heshiis ka roon midka hadda ee doorashada Soomaaliya, waxaana muuqata rajo ay qabaan mucaaradka iyo guud ahaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya